थप २९ जनाले पाए बहिर्गमन भिसा, ६० दिनभित्र साउदी छाड्नुपर्ने ! – Enepali Samchar
November 20, 2020 adminLeaveaComment on थप २९ जनाले पाए बहिर्गमन भिसा, ६० दिनभित्र साउदी छाड्नुपर्ने !
काठमाडौं । साउदीस्थित नेपाली राजदूतावाससमक्ष बहिर्गमन भिसाका लागि आवेदन दिएका थप २९ जनाले बहिर्गमन भिसा पाएका छन् । हालसम्म साउदीमा आवेदन दिएकामध्ये १२ सय ८० जनाले बहिर्गमन भिसा पाएको दूतावासले जनाएको छ ।
साउदी अरेबियाका विभिन्‍न कम्पनी, प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमतिपत्र (अकामा) नबनाइएका वा नवीकरण नगरिएका कारण स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बहिर्गमन भिसा सहज र शीघ्र रुपमा प्रदान गर्दै आएको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले सहज रुपमा बहिर्गमन भिसा प्राप्त गर्न साउदी सरकारलाई अनुरोध गरेबमोजिम त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई बहिर्गमन भिसा दिइएको हो । हाल कतिपय नेपालीले आफ्नो अकामाको म्याद रहे/नरहेको बारेमा स्पष्ट नबुझी दूतावासमा पठाउने गरेको हुँदा आफ्नो अकामाको म्याद समाप्त भएको र कम्पनीले बहिर्गमन नलगाइदिएको भए वा अकामाको म्याद रहँदै कम्पनीले हुरुब भनी जानकारी गराएको अवस्था भएमा मात्रै पासपोर्ट र अकामाको फोटो खिची ह्‌वाट्स एप गर्न अनुरोध गरेको छ ।
साथै, विभिन्‍न कसुरमा मुद्दा रहेका व्यक्तिहरुले पनि त्यस्तो मुद्दा सामाधान भइसकेपछि मात्रै यस्ता कागज पठाउन पनि जानकरी गराएको छ । बहिर्गमन भिसा जारी भएकाहरु जारी भएको मितिले ६० दिनभित्र साउदी अरब छाडिसक्नुपर्ने भएकाले स्वदेश फर्किने तयारी गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामै संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो, सक्रिय संक्रमित १२ हजार बढी
प्रचण्डको साथ छाडेका बादललाई ओलीले ललिपप देखाएर यसरी फसाए: बन्दैछ घर न घाटका